Ụgbọ ala traktọ, nnukwu gwongworo ciment, gwongworo Lpg - EGO mara mma
Ọhụrụ ngwaahịa maka mkpa gị niile
Lelee ahịrị ngwaahịa anyị
E hibere Honor Shine Group na 2007, ọ bụ otu nnukwu ụlọ ọrụ na china nke na-arụpụta na ire nke ụgbọala na-adọkpụ, ọkara trailers, gwongworo jụrụ oyi, gwongworo ihe igwe ihe, gwongworo Van, ụgbọ ọkụ, ụgbọ mmiri mmiri, gwongworo. , mmanụ ụgbọ ala & ụgbọ ala ụgbọ ala na -adọkpụ, nnukwu ụgbọ ala ciment trailers, na ihe owuwu ihe dị ka onye na -egwupụta ihe, rollers okporo ụzọ, onye na -eburu wiil, ngwakọta na -agwakọta korota na ihe ọkụkụ na -akụ!
Site na ọtụtụ afọ mbọ na nkwado ndị ahịa, ngwaahịa anyị eregoro ihe karịrị mba 60 na mpaghara, dịka Russia, Philippines, Indonesia, Ghana, Tanzania, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Algeria, Sudan, Mali, Ghana, Nigeria , Senegal, Argentina, Chile, wdg.
Isi ihe na-adọkpụ ụgbọala na-adọkpụ gụnyere 40 ft akpa sidelifter, windmill blade trailer, trailer gooseneck na-adọkpụ, trailers ala dị ala, trailers nke ihe na-adọkpụ, mmanụ ụgbọ ala & ụgbọala na-adọkpụ ụgbọ mmiri.
Ngwa ndị mbata
Flatbed Tow Truck na crane 8 tọn
Ụgbọ ala mmanụ ụgbọala FOTON Auman 4 × 2 12cbm